Umhla My Pet » umphezulu 5 Ukuzithethelela Ukuba Ungaqalisa ukuya Umhla
Eyona nto imbi ngokuba emva umhla uyeza ubuso-ngobuso kunye umntu sele ndilinde wena. Nangona kusenokuba nzima, ngokunyaniseka kusoloko iphumelelayo. Plus ukuba umhla wakho kukuqonda ngokwenene, yena / uya kukunika ngokupheleleyo ukuba kuxhamle umthemba. ngezantsi, kukho izizathu ezintlanu credible ngenxa yokuba emva kumhla.
Utsalele googled indawo yokuhlangana izihlandlo eziliqela, siyinqayile i ndlela, esamshiya imizuzwana embalwa yokuqala kodwa nangoku emva kwexesha. Nokuba yendlela inzima okanye kuchatha ngamnye ukukhanya okubomvu, ngembonakalo ixesha kukho impazamo nonyanisekileyo oya ngokulula xo.
Ukuphepha ukusebenzisa Suri, Mna vela Google imaphu indawo yam yokugqibela umzekele umfanekiso imiyalelo ngaphambi kokuba ndikushiye. Nangona oku ivumela mhla olufanelekileyo ixesha lokulungiselela, Mna ndihlala kakuhle lumkiswa xa umele okanye apho kanye apho wam lokugqibela nto leyo ebangela awuqini. Kwakhona, ukuba ungekaqali oku kudla ngokuba Bahleka.
Ayikwazanga ukufumana yokupaka
Ukuphila isixeko vela kuthetha ukuba akukho yokupaka. Nangona ofanelekileyo ukuba ukhethe indawo ngaphakathi kumgama ngenyawo, vela, amabala umhla eyona fun ayinguwe umgama ngenyawo elula kude. Kule imeko, kungcono ukufumana isakhiwo yokupaka elikufutshane qinisekisa ukuba uzinike ithuba elaneleyo ukufika ngendlela ngexesha.
Ukuba umthandi pet (ngethemba umhla wakho kakhulu), pet wakho umntwana wakho. Ngexesha ukuza ekhaya ukutshintsha nezinxibo phambi komhla yakho isikhubekiso liphela pet wakho obonakala phantsi imozulu, wena ngokwemvelo uza ukubathuthuzela. Nangona nje oku kungathatha ixesha elide kunokuba kulindelwe, wena kunye isilwanyana sakho uya ndizive ngokukhululeka, ngokukodwa ekubeni ebusuku nibe kamva kunesiqhelo.
Umsebenzi wabaleka emva kwexesha
Kwiintlanganiso ngomzuzu wokugqibela iprojekthi hamba ukuze elahleka kumsebenzi wakho, konke kwenzeka kuthi. Nangona oku credible imisebenzi sisingxengxezo, qiniseka ukuba akukho nto yaba mkhwa umhla bakho baya kubona ukuba wena, umsebenzi kakhulu ephambili ngaphezu ulwalamano lwakho.
Nokuba sisingxengxezo yakho, kubalulekile ukwazisa umhla wakho, ukuba uya kuba emva kwexesha. Hayi nje oku njengesenzo intle, kodwa ubonisa ukuba umntu onenkathalo.